शिल्पा र प्रकाश बिच बिबाद चर्कियो,प्रकाशलाई मुद्दा हाल्ने - Micro Sansar
Apr 11, 2021 छवि ओझा, प्रकाश सुवेदी, रजतपट, शिल्पा पोख्रेल
काठमाडौं, २९ चैत्र २०७७
पछिल्लो समय नेपाली सिने जगतमा विभिन्न बिबाद र काण्डहरु आइरहेका छन । नायक नायिकाहरु र अन्य बिधाका कलाकारहरुले विभिन्न बाहानामा गाली खाइरहेका छन। यसैक्रममा अहिले चलचित्र बजारमा अर्को ट्विस्ट आएको छ । त्यही माथी पछिल्ला केही महिना यता लगातार चलचित्र बजारमा बिबादित नाम हो संचारकर्मी तथा “रजतपट’ टेलिभिजन कार्यक्रमका संचालक प्रकाश सुवेदी । सुवेदी कै कार्यक्रम “रजतपट” बाट पुजा शर्मा र दिपा श्री निरौला ले दर्शहरुकोको लामो समय सम्म नराम्रो गाली खाएका थिए । त्यसैगरी नायिका स्वस्तिमा खड्का र निश्चल बस्नेत पनि संचारकर्मी सुवेदी बिरुद्द खनिएका थिए ।
अहिले फेरि शिल्पा पोख्रेल र छवि ओझा को बिबादलाई सतह ल्याएपछी सुवेदी अर्को बिबादमा तानिएका छन । अभिनेत्री शिल्पा र निर्माता छवि ओझा बिगत एक बर्ष देखिको बिबाद अझै सल्टिएको छैन । यी दुई को बिबाद अझै पनि अदालतमा बिचाराधिन रहेको छ । भोजपुरी फिल्म ‘जय सम्भु’ मा अभिनय गरेपछि सोही फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक सोनु खत्रीसंग अफयर छ भन्ने समाचार टेलिभिजन कार्यक्रम “रजतपट” बाट सार्बजनिक भएपछी शिल्पा पोख्रेल अर्को तनाब परेकी छिन। एक स्ट्याटस सहित फेसबुकमा उनले सोनु र कोमलको भिडियो सार्बजनिक गरेकी छिन ।
कोमलले पनि सो रिपोर्टमा बजेको आफ्नो भिडियो पुरानो भएको र सोनुले शिल्पालाई समातेर तानेको भिडियोमा सोनु नभएको कुरा भिडियो बाटै प्रष्ट पारेकी छन् । शिल्पाले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा “रजतपट’ नामक कार्यक्रममा संचारकर्मी प्रकाश सुवेदीले मेरो चरित्रहरण गर्नका निमित्त कतिसम्म निच हर्कत गरेका रहेछन त ? म मात्र होइन निर्माता निर्देशक सोनु खत्री र उहाँकी पत्नी कोमल खत्रीपनि उनको ‘पीत पत्रकारिता’को शिकार बन्नु भएको छ । तपाई लामो समयदेखि संचारगृहमा कार्यरत ‘पत्र…’ के भन्ने सम्बोधन पनि छैन । तपाई कुन सिद्धान्तमा टेकेर पत्रकारिताको मर्म मारिरहनु भएको छ ?
नेपालमा प्रचलित ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’को सिद्धान्त के यहि हो ? सम्मानित अदालतको विचाराधीन मुद्धामा कसैले पनि बोल्न उचित नहुने र कानुनी रुपमा नपाइने कुरा तपाई प्रकाश सुवेदीले बोलेर अदालतको मानहानी गरेको ठहर्दैन र ?” भनेर प्रश्न गरेकी छिन। निर्माता तथा निर्देशक सोनु खत्रीसंग अफयर छ भन्ने समाचार टेलिभिजन कार्यक्रम “रजतपट” बाट सार्बजनिक भएपछी सोनु ले भिडियो बनाउदै कार्यक्रम संचालक सुवेदी ले आफुले गलत बोलेको भनेर माफी नमागे आफू हरु बाध्य भएर कानुनी बाटोमा जान सक्ने कुराको सङ्केत भिडियो मार्फत गरेका छन ।
उक्त भिडियोमा भनेका छन सुवेदी लाई पटकपटक फोन र म्यासेज गर्दा कुनै रिप्लाई नआएको र आफ्नो श्रीमती रजतपट कार्यक्रम हेरेपछी डिप्रेसनमा गएको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन । सुवेदी ले केही दिन अगाडि सार्बजनिक गरेको कार्यक्रम “रजतपट” मा ‘बाहिरियो शिल्पाको नयाँ कान्ड!बोले छवि ओझा’ भनेर राखेका थिए । त्यति मात्र नभएर शिल्पा पोख्रेलको यो भन्दा अगाडि बि स. २०६८ सालमा बिकास बस्याल सङ्ग डिभोर्स गरेको कुराको समेत पर्दाफास गरेका थिए । त्यसपछि शिल्पालाई सामाजिक संजाल र टिकटकमा धेरैको गाली आइरहेको छ । संचारकर्मी सुवेदी लाई पनि सामाजिक प्रयोगकर्ताले घरायसी कुरामा बढी चासो देखाएको भन्दै गाली गरिरहेका छन ।